ထူးဆန်းသော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထူးဆန်းသော
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 10, 2012 in Creative Writing | 23 comments
အန်…. တန်းလန်း ကြီး ပါလား ကိုတောက် တဲ့း)
စာဆုံးတဲ့အထိ တခါတည်း ဖတ်ဖြစ်သွားအောင် မောင်တောက်တဲ့စာက ဖမ်းစားသွားလိုက်နိုင်တယ်။
ခုမှ ဇာတ်က တည် တုန်း ဆိုတော့…….
စိတ်ဝင်စားစရာမို့ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော် ညန်ညန်လေး။
အင်းးးးးးးးး စောင့်ဖတ်ရတော့မှာပေ့ါလေ။တန်းလန်းကြီးဖစ်နေတော့း)
အီကား ကျွန်ုပ် မောင်ပေ အိ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကို မခြွင်းမချန် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပေတကား
နံမည် ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ အကြံပေးကြပါဦးဗျာ..
အထင်မှားတော့မယ် သိလို့ မေးမလို့ကြံတုန်း ကြောင်လေး ဦးသွားပြီ..
ကိုအိမ်မြှောင် ဘိုးအေရေ ဆက်ရန်ရှိသေးရင်လည်းရှိသေးကြောင်းသံကြိုးလေးရိုက်သွားပါကွယ်။
ဒီဇရပ်လိပ်စာလေးများရှိရင် အိပ်မက် များ မမက်ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေကို လွှတ်ချင်သား….
တောက်တဲ့မ ဒီမှာ လန်းတန်းဂျီးဖစ် အဲ့အဲ့ တန်းလန်းဂျီးဖစ်ကျန်ဂဲ့ဘီ
လူဇိုးမ ကောင်းခန်းရောက်မှ မီးဖျက်ပလိုက်တယ် ဟွန်း
ထို အောင်မောင်း ဆိုသော လူကြီးသည် ဇရပ် ပေါ်သို့ ရောက်လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ပြီးနောက်
သူနားနေမည့် နေရာတဝိုက်အား ရှင်းလင်းလေသည်။ ပြီးနောက် ခရီးပန်းလာသည်ဖြစ်ရ်ျ တမှေးတမော
အနားယူ အိပ်စက်လေ ရာ သူသည်လည်း အလားတူ ထိုအိပ်မက် ကိုပင် မက်လေဧ။်။ သို့သော် သူ့အားပြောသော စကားမှာမူ “ငါသည်ကား သေးခဲ့ လေပြီ။ သို့သော် ငါပြန်ကြီးချင်သလိုဖြစ်နေဧ။် ငါ့အား
သေးအောင်လုပ်ရ်ျ export လုပ် ရောင်းစားလေတော့” ဟူရ်ျ အိမ်မက် မက်လေဧ။် ။
ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် ဆက်ရ်ျ ရေးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုကြီးအံကလည်း သူများတွေပြောသလို တန်းလန်းကြီး …… အကျင့်ပုတ်တယ် …… မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေ ဗီဒီယိုပြန်ထုတ်သလို လေးခွေတွဲလုပ်နေတယ် ……. စိတ်ဇိုးတယ် …….. မြန်မြန်လေးရေး မြန်မြန်လေးတင် ….
ကိုတောက်တဲ့ လိုရုပ်ဆိုးတဲ့ လူနဲ့ပဲတွေ့မလား
ဆက်လက်စောင့်မျှော်ဖတ် ပါ့မယ် ဖတ်လို့ အရှိန်ကောင်းနေတုန်း မှာ မီးပျက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီ ငယ်ငယ်ကဆို စာကျက်ခိုင်းရင် မီးလာမှ ကျက်မယ် မီးလာပြန်တော့ မျက်လုံးက အိပ်ချင်လာတယ် အဲ့တော့မီးပျက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ် တကယ်လည်းဆုတောင်းပြည့်တယ် စာကျက်လို့ နာရီဝက်လောက်ဘဲ ရှိသေးတယ် မီးကပြန်ပျက်သွားပြန်ရောအဲ့လိုဘဲ ငိုက်လိုက် ပျက်လိုက် ဖြစ်နေတယ် မြန်မြန်လေးရေးပေးနော် စောင့်ဖတ်နေမယ် …
မျှော်ရမှာလား ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းက မပြီးသေးဘူးထင်တယ်
လူထူးဆန်းကြီး ထသွားတဲ့ဇရပ်က အစောနားက အိပ်မက်မက်တဲ့ဇရပ်လားဟင်
ယခုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်၏ မဖြစ်ညစ်ကျယ် စာများအား
လာရောက် အားပေး ဖတ်ရှုတော်မူကြပါကုန်သော အရပ်ကတို့အား
ကျွန်ုပ် မစ္စတာ တောက်တဲ့မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတော် မူပါကြောင်း
ရှေးဦးစွာ ပြောကြားလိုပါ၏ ……။
ယနေ့အဖို့ “ထူးဆန်းသော အဆက်” ကို တင်လိုက်ပါကြောင်း …
ဆက်ရန် ဟု မရေးသည်မှာ ကျွန်ုပ်အဖို့ ဒီရွာကြီးကို ဆပ်ရန်
အကြွေးပို့စ်များ ရှိနေပါသေးသောကြောင့် ဆက်ရန်ဟု မရေးရဲခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း …
အံစာ .. အဲ .. မစ်ချတာ တောက်တဲ့
ထူးဆန်းသော ပြီးရင် ဗိုက်ကလေးသော ရှိုပီး ရေးပေးဖို့လကွက်စ်ထ် လုပ်ပါတယ်ခင်ည
ဝုတ်ကဲ့ပါ ခည ..
အားပေး ဖတ်ချုတွားဒါ တေးဇူးတင်ပါလယ် ခည ..
ပျောက်နေဒလားလို့ ခည ..
ဘီအီးနဲ့ မှောက်နေဒလား ခည …